Sajhasabal.com | Homeमहादेवलाई यस्ता ५ पवित्र वस्तु चढाउँदा पुण्य होइन पाप किन लाग्छ ? जानी राखौ
महादेवलाई यस्ता ५ पवित्र वस्तु चढाउँदा पुण्य होइन पाप किन लाग्छ ? जानी राखौ
तर विष्णु भगवान एकदमै चलाख१ जालन्धर र महादेवको युद्ध भैरहेको बेला विष्णु भगवानले जान्धरको रूप धारण गरी उनकी पत्नी ‘तुलसी’को पतिव्रत शक्ति लुट्न गए। जालन्धररूपी विष्णुले तुलसीको पतिव्रतलाई लुट्नेबित्तीकै महादेवले जालन्धरलाई भष्म बनाइदिएका थिए।
तर, शवजी त्रीमूर्तीदेवहरू मध्ये संहारकर्ता हुन्। त्यसैले नै शिवजीलाई सिन्दूर प्रयोग गरेर पुजा गर्नु ठूलो भूल हुन जान्छ। यस्तो शिवपुराणमा उल्लेख गरिएको छ। एजेन्सीको सहयोगमा